साउथ फिल्मका यी हुन् ६ महँगा अभिनेत्री, जान्नुहोस् कस्को पारिश्रमिक कती ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
साउथ फिल्मका यी हुन् ६ महँगा अभिनेत्री, जान्नुहोस् कस्को पारिश्रमिक कती ?
भारत एक बहु जाती बस्ने देश हो । यहाँ धेरै प्रकारका जात बस्ने गर्छन् र त्यही अनुसारको समाज विकास भएको हुन्छ ।
भारतमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि बलिउड भात्र नभइ साउथ फिल्म इन्डस्ट्री फिल्म पनि रहेको छ । साउथ इन्डियन फिल्म पुरा भारतमा मात्र नभई अन्य देशमा पनि निकै चर्चा हुने गर्छ ।
यो फिल्म अहिलेको युवाहरुको रोजाई बस्न सफल भइरहेको छ । किन भने बढी साउथ फिल्ममा याक्सन हुने गर्छ । बलिउडपछि साउथ फिल्म इन्डस्ट्री भारतको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो फिल्म इन्डस्ट्री हो।
जसका कारण पनि चर्चा निकै हुनेगर्छ । साउथ फिल्ममा काम गर्ने अभिनेत्रीको पनि लोकप्रियता निकै रहेको छ ।
साउथ फिल्ममा अभिनय गर्ने अभिनेत्रीहरुको बलिउड बजारमा पनि राम्रो माग हुने गर्छ । जसका कारण उनीहरु फिल्ममा काम गर्न धेरै रकम लिन्छन्।
कतिपय अभिनेत्रीको प्रोफाइल बलिउड अभिनेत्री भन्दापनि धेरै माथि रहेको छ । आज हामी तपाइलाइै साउथ फिल्मका नेही महँगा अभिनेत्रीको बारेमा चर्चा गर्दै छौ ।
1 .नयनतारा :
2.काजल अग्रवाल :
साउथ इन्डस्ट्रीको टप टेन अभिनेत्रीमा काजलको नाम सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । हालै उनले बिजनेसम्यान गौतम किचलूसँग बिहे गरेकी हुन्।
उनले तमिल, तेलुगु सहित हिन्दी फिल्ममा पनि काम गरिसकेकी छन्। उनी आफ्नो एक फिल्मको लागि तीन करोड लिन्छिन्। बलिउडमा उनले अक्षय कुमार र अजय देवगन जस्ता हिरोसँग पनि अभिनय गरिसकेकी छन्
3.सामन्था अक्किनेनी :
4.तमन्ना भाटिया :
तमिल, तेलुगु र हिन्दी फिल्ममा काम गरिसकेकी अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक फिल्मको लागि डेढ करोड लिन्छिन्। उनले तमिल र तेलुगू भाषाको फिल्ममा धेरै काम गरेकी छन्। हिन्दी फिल्ममा भने उनको करियर जम्न सकेन ।एजेन्सीको सहयोगमा
अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीलाई पुत्रीलाभ भएको छ ।हिजो सोमबार